Imihlinzo: Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo - imihlinzo
Le Imihlinzo niyi pahthelwa yimibuliso yakwa La Veta:
Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo
Lion found in freezer of a restaurant
Lengonyama ifunyenwe ekhitshini lenye irestaurant ikwifreezer. Phofu lerestaurant isecaleni kwe zoo. Xa lomfo wale ndawo ebuzwa ngale ngonyama ukuba uyenzani, uziphendulele ngelithi ebeyi tyisa izinja zakhe. Iphele ivalwa ke lerestaurant ngezi zathu ezibambekayo ngoba ayikwazi ukugcina ingonyama (nasiphi na isilwanyana) kunye nokutya okutyiwa ngabantu.
Kukho umfo apha wase India obanjelwe ukuzinika kwinenekazi ebeli lele ecaleni kwakhe kwiFlight ebisuka eHouston esingisa eNew York
Flight-Man arrested for helping himself to a fellow woman co-passenger
Kuthe kusathe cwaka kule flight kwavakala isikhalo sosisi othile. Bothuke baphantse bokuwa xa besiva ukuba eliNdiya alimphatha phathi usisi wabantu. Alonelanga ukumcofa cofa, beli nazo neendawo ezimphuzayo noku mphuza. Umfo ‘mdala uphele ebanjwa waze wanikwa isigwebo soku bhatala i$250 000 USD okanye abese luvalelweni iminyaka emibini.
Unyana weScientist ufelwe yimpuku waze wakhetha ukuyenza ihelicopter kuba engafuni ukohlukana nayo
Mice turned into a helicopter
Lonyana walomfo uye wakhathazeka kakhulu ukufa kwale mpuku. Kuthe ke xa utata wakhe akubona ukuba unyana lo wakhe imkhathazile lento weza necebo wacebisa ukuba bayenze ihelicopter eqhutywa ngeremote. Bayenzile ke lonto, ingaqali ukwenzeka ke phofu. Bakhona nabanye abantu abazenzela iihelicopter ngentlobo ntlobo zezilwanyana.
Ngale mini uSakhza ucela abantu abafuna ukuthandazelwa ukuba beze ngaphambili. Abantu abene ngxaki, njalo njalo. Aze ngaphambili ke omnye umfo. Eqala noku bonwa kwalapha ecaweni lomfana. Athi, “Ndiyive ndidlula leCawa ndaqonda ukuba andina kunga ngeni. Ukhona uThixo apha ngaphakathi.” Acelwe nyani ukuba eze apha ngaphambili lomfana, anikwe umboko kuthiwe maka thethe.
Athi lomfana, “Mfundisi ndine Ibola. Ndiya qonda njeng’ba ndisiza kulena iCawa ndaku lufumana uncedo.” Akhe ke lomfana, asitsho istory sakhe. Ukuba uyifumene njani, uthe xa egqiba lomfana wadlulisa umboko kuMfundisi. Wathi uMfundisi (nguSakhza lowo), “Hayi mfo ka Thixo sowu yinika umshumayeli lowo.” Yeey! Ame uMfundisi, “Yinike umshumayeli lowo mfo kaThixo.” Umshumayeli abe yena esithi, “Ha a yihlo mna bendi konyusa nje yigqithisele uMfundisi iMic.” Ancame uMFundisi athi, “Yigcine mfo kaThixo uyiphiwe libandla leyo ungagoduka nayo.” Yeeey! 🙂
Bonus: Nicelile naviwa, khani mamele intshumayelo kaPastoriko apha ngezantsi kwabo bayi phosileyo.
‹ Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati	› Ezempilo: Ibali lika Wimpie van der Merwe